Maskaxda dadku waa bini-aadamka, damaca waa sheydaanka.
Rabitaanka galmada iyo rabitaanka awoodda abuuro jahannamo.
Jahannamada waxay leedahay xukunka adduunka jireed, maktabad, jinsi, iyo adduunyada maskaxda, virgo-scorpio, qaab-rabitaan.
Erey KII ma caroodo oo ka sii darey, xanaaq iyo cabsi ba, dhib iyo xanuujiyey maskaxda aadanaha in ka badan fikirka iyo erayga cadaabta. Ku dhawaad ​​qof walba wuu yaqaan, badankoodna kama hadli karaan la'aantiis, qaar baa ka sii daran, laakiin, bannaanka kaniisadda iyo dadka aqoonta u leh, dad aad u yar ayaa ka fikiraya muddo dheer oo aan ku qanacsanayn ogaanshaha meesha ay tahay, waxay tahay, iyo haddii ay tahay , sababta ay sidaas tahay.
Fikirka cadaabta ayaa lagu dhajiyay dhammaan nidaamyada diinta waxaana lagu muujiyaa eray ay dadku siinayaan dadka cilmiga fiqiga ee diintaas. Xitaa qabiilooyinka duurjoogta ah waxay ku fikiraan fikirka cadaabta; In kasta oo ayan haysan diin ay dejistaan ​​haddana waxay sugayaan meel ama xaalad ay maskaxdooda ku muujiyeen eray u taagan cadaabta.
Fikradda cadaabta ayaa si gaar ah nooga imaanaysa xagga Cibraaniyada, Griiga iyo Latinka; ereyada sida gehenna, She'ool, tartaros, hades. Aqoonyahanada diinta masiixiga waxay dib ugu noqdeen fikradaha qadiimiga ah waxayna dib usoo nooleeyeen, balaariyay, rinjiyeeyeen, qurxinayeen, macnayaashaas hore waxay u noqdeen tirooyin xariif ah iyo muuqaal sida ay soo jeediyeen karti darida diinta iyo ujeeddooyinka ku kiciyay. Sidaa darteed Jahannamada waxaa lagu tilmaamay inay tahay meel uu galo qofka loo garto inuu la kulmo silica, silica, iyo jir dilka ee heerar kaladuwan oo xoog iyo muddo ah.
Naarta ayaa la sheegay inay tahay meel dunidan ka baxsan. Waxaa la sheegaa inuu ku yaal bartamaha dhulka; iyo, oo ah meelaha hoose ee dhulka, iyo inuu inagula sii hoosaysiiyo. Waxaa looga hadlaa ereyada sida godka, qabriga, godka ama godka burburka, godka ugu hooseeya, dhulka hooska ah, meesha aan la arki karin ama gobolka, hoyga kuwa sharka leh. Waxaa la sheegaa inay tahay god, dalool, guri shaqo, xabsi, meel xannibaad xanuun badan leh, meel daboolan ama meel qarsoon ah, meel lagu silciyo, webi ama haro dab ah, meel ay ku yaalliin jinniyo mareennada. Waxaa kaloo loo sheegaa inuu yahay mid qoto dheer, mugdi ah, dhammaan wax wada cuna, oo aan la tallin karin, aan qoomamaynayn, iyo ciqaab aan dhammaad lahayn. Waxaa lagu sifeeyay inay tahay meel dab iyo baaruud ay si aan kala joogsi lahayn u gubtaan iyo meeshii dixirigoodu qunto oo aan waligeed lagu qancin.
Cadaabta fiqi ahaaneed waxaa loo isticmaalay in lagu soo jiito maskaxda dadka waxa ku kalifay baahida degdega ah ee ay u qabaan in ay diinta helaan oo ay markaa ka baxsadaan cadaabta. Laakiin iyaga oo aan ku qanacsanayn iyaga oo siinaya tusaalooyin muuqda oo loogu talagalay dadka waaweyn, fiqiga ayaa ku dadaalay in ay u sharxaan carruurta yar yar qaar ka mid ah hay'adaha jahannamada. Qoraalka ku saabsan qaar ka mid ah cadaabta Brahmanism, Monier Williams waxay si wanaagsan ugu barbar dhigtaa cadaabta masiixiga waxayna soo xigatay buugga Roman Catholic ee carruurta ee uu qoray Rev. J. Furniss. Aabaha Reverend, sida uu sharraxaad ka bixinayo, waxa uu gaadhay illaa godkii afraad oo ah kulayl la kariyey. Oo wuxuu yidhi, Dhegaysta, waxaa la maqlaa cod u eg foornada sida karinta oo kale. Dhiiggu wuxuu ku kufaayaa maskaxda maskaxda wiilkaas; Maskaxda ayaa karkaraya isla markaana madaxa ka soo dhacaya; Oo dhuuxa lafihiisana wuxuu ku dubanayaa lafihiisa. Wuxuu sii wadaa, "godka shanaad waa foornada kulul ee cas oo ilmuhu yar yahay. Maqal sida ay u qayliso si ay u soo baxdo; Bal eeg sida ay u leexato oo isu rogmayso dabka; Madaxa ayey ku garaacday saqafka foornada. ”Buuggan waxaa loo qoray faa'iidooyinka carruurta uu aabbo u yahay kaniisadda katooliga Romaniga.
Monier Williams waxaa loola jeedaa qoraa kale oo bixiya aragti ballaaran oo guud oo ku saabsan dhamaadka adduunka iyo aayaha kuwa sharka leh. Wuxuu qoray, "Dunidu waxay u badan tahay in loo rogi doono haro weyn ama dhul dab ah oo dareere ah, kaas oo kuwa sharka leh lagu degi doono, oo had iyo goorba wuxuu ahaan doonaa duufaano, kaasoo ay ku duufan doonaan oo ku jeesan doonaan, oo aan maalin nasasho lahayn ama habeen. . . madaxyadooda, indhahoodu, carrabkooda, gacmahooda, cagtooda, dheerarkooda iyo waxyaallahoodu ay weligood sii dhalaali doonaan, waa dab dhalaali doona, oo waa u qadhaadh inuu ku dhalaasho dhagaxyada iyo waxyaalahooda.
Ku laabashada mawduucyada sheekha, Monier Williams ayaa ka soo xiganeysaa khudbadda wacdiye caan ah, kaasoo u sheegaya dhagaystayaashiisa waxa ay u maleynayaan mustaqbalkooda — ilaa ay diintaas u galaan oo keliya sanduuqa badbaadadooda. “Markaad dhimatid naftaada ayaa la ciqaabi doonaa oo keliya; taasi waa cadaabta iyada; laakiin maalinta qiyaame jirkaaga ayaa naftaada la midoobi doona naftaadana waxaad u heli doontaa mataano labo labo ah. Oo jidhkaaguna wuxuu dhuujiyaa dhibicyo dhiig ah, Oo naftaaduna waxay la joogtay murug. Dabka kulul, sida aan dhulka ugu leennahay oo kale, jirkaagu wuxuu noqon doonaa sida lugu aasto, oo weligiis aan la arkin; Wadooyinkaaga oo dhan oo jidadkaagu maro si cagahaagu u xanuunsado; Xarig kasta oo shaydaanku weligiis ku ciyaari doono heestiisa muusikada ee baroorta aan loo dulqaadan karin. "
Tani waa tilmaan bixin wanaagsan oo soojiidasho leh waqtiyo isbarbar dhiga. Laakiin markay maskaxdu sii iftiimayaan doodaha sawirada noocaan oo kale ahi miisaankooda way dhintaan, sidaa darteedna noocyada cadaabta noocaas ah ayaa ka baxa moodada. Xaqiiqdii, iyadoo ay sii kordhayaan tirada badan ee sheekooyinka cusub, caqiidada moodada ah ayaa hadda noqota: cadaab ma jiro. Markaa pendulum wuxuu isu beddelayaa mid ba'an oo dhanka kale u sii socda.
Marka loo eego noocyada maskaxda ee gala jidhka jidh ahaaneed, waxa dadku rumaystaan ​​ee ka dhanka ah ama ku saabsan cadaabta waa isbedeleen waana la beddeli doonaa waqti ka waqti. Laakiin waxaa jira wax bixiyay oo wali keenaya fikrado iyo aaminsanaan ku saabsan cadaabta. Naarta laga yaabo inaysan ahayn waxa lagu rinjiyeeyay. Laakiin hadduusan jirin cadaab hadaa maysan jirin jahannamo, oo dhamaan maanka weyn ee maaddada la halgamey mowduuca waxay la dagaallameen wax aan jiritaan lahayn, iyo malaayiin aan tira lahayn oo waagii hore ku noolaa kana fikiray cadaabta waxay fiirinayeen oo naftooda ka walwaleen wax aan waligood ahayn weligood jiray.
Caqiido ay wadaagaan dhammaan diimaha oo dhan waxay ka kooban yihiin wax run ah, iyo waxa ninku inuu barto. Marka tirooyinka iyo shaqada fresco laga dhigo, qofku wuxuu ogaanayaa waxyaabaha aasaasiga ah ee waxbaristu inay run tahay.
Labada daruuriga ah ee caqiidada ayaa ah, marka hore, silica; sida natiijada, labaad, ficil qaldan. Waxaa jira wax dadka ku jira oo loo yaqaan damiir. Damiirku wuxuu u sheegaa ninka goorta uusan qalad sameyn. Haddii nin caasinimo niyadda, wuu khaldamayaa. Markuu khalad sameeyo wuu xanuunsadaa. Dhibaatadiisu waxay u dhigantaa khaladka la sameeyay; waxay noqon doontaa mid dhakhso ah ama dib loogu dhigi doono sida lagu go'aaminayo sababihii keenay tallaabada. Aadanaha aqoonta uu u leeyahay xaqda khaldan iyo khalad, oo ay weheliso silica uu kala kulmay, waa labada xaqiiq ee ka dambeeya aaminaadiisa cadaabta. Kuwaas ayaa isaga u oggolaanaya inuu aqbalo cadaabta caqiidada ee fiqiga, oo loo qorsheeyay, lagu dhisay laguna rakibay alaabada, qalabka iyo shidaalka, oo lagama maarmaan u ah shaqada gacanta ku jirta.
Nidaamka diimeed ee isku dhafan ilaa caqiidada qowmiyadeed ee aan hagran, mid walbaa wuxuu qorsheeyaa oo u hagaajiyaa cadaabta meel ahaan iyo waxyaabaha ku habboon inay sababaan raaxada iyo xanuunka ugu weyn ee dadka deggan cadaabta. Wadamada kuleylaha ah diintu waxay kuleylisaa cadaab kulul. Dadka ku nool heerkulka cirifka ayaa leh cadaabta qabow. Aagga kulul ee dadku waxay leeyihiin naar kulul iyo qabow. Diimaha qaarkood tiradu way kala duwan tahay. Diimaha qaarkood waxay bixiyaan labaatan iyo sideed ama kabadan oo cadaab ah qeyb hoosaadyo iyo waaxyo si loo helo hoy ku habboon shuruudaha dhammaantood.
Diimaha qadiimiga ah waxay siinayeen jahawareer kuwa caqiidadooda ah. Midkasta oo ka mid ah diimaha badan ee diinta masiixiga waxay bixisaa cadaab, looma jeedo kuwa ka tirsan diintiisa iyo kuwa rumeysan caqiidooyinkeeda gaarka ah, laakiin diimaha kale ee masiixiga, dadka diimaha kale, iyo kuwa aan diin laheyn. Sheydaanku waa xaalad dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah ilaa kuwa inta murugada iyo raagada leh, cadaabta nooc kasta iyo darajo ah ayaa la rumeysan yahay.
Sababta ugu weyn ee cadaabta diinta waa sheydaanka. Diin kastaa wuxuu leeyahay shaydaan kasta oo shaydaan walbana wuu ku kala duwan yahay qaabka iyo adeegga ay ka helaan sheydaanka kale. Shaydaanka wuxuu u adeegaa laba ujeedo. Wuxuu damco oo ku sasabaa nin inuu xumaado, wuuna hubiyaa inuu qabto ninka falka sameeya. Ibliis ayaa loo ogol yahay dhammaan xorriyadda uu doonayo dadaalkiisa inuu ku jirrabo ninka, haddii uu ku guuleysto dadaalkiisa wuxuu ninkaas u helaa abaalmarintiisa.
Xaqiiqada ka dambaysa aaminaadda sheydaanka ayaa ah jiritaanka nin damac leh iyo saameyntiisa iyo awooddiisa maskaxdiisa. Waxaa laga doonayaa rajo dadku. Haddii nin u keeno damaca sharci-darrada ah - oo sharci darro ah sida ay go'aamisay damiirkiisa iyo heerkiisa anshaxeed — wuxuu ku xiran yahay rabitaankaas si aamin ah sida Ibliis loo sheegay inuu maadooyinkiisa ku sii hayo addoonsiga. Maaddaama qaabab badan oo xannuunno iyo damac leh ay u adeegaan marka loo eego rabitaan aan isku duubneyn, sidaa darteed waxaa jira jinniyo badan iyo cadaab iyo darxumo.
Maskaxda carruurta iyo sida loo qiimeeyo iyo kuwa ka baqaya ayaa la dagaallamay oo aan u qalmin jagooyinka ay nolosha ka haystaan ​​caqiidooyinka diabolical ee naarta fiqiga. Ilaah waa caayaya oo shaydaan baa ku caayaya tuuganimada, macnaha ama muujinta daahfurnaanta caqiidada.
Waa khalad in la cabsi geliyo hooyooyinka iyo carruurta iyo in lagu cabsi geliyo dadka caqiido cabsi leh oo ku saabsan cadaabta. Laakiin way habboon tahay in qof walbaa ogaado waxa ku saabsan cadaabta, meesha, waxa, iyo sababta ay u tahay, iyo waxa ninku ku xiran yahay. Waxa jira waxyaabo badan oo run ah oo ku jira qoraalada guud ee ku saabsan cadaabta fiqi ahaaneed, laakiin caqiidooyinka iyo kala duwanaanshahoodu waa la naaqusay, dib-u-dhac, duubnaan, qaldan, in maanku ka xanaaqo, jees jeesto, diido inuu rumaysto ama iska indhatiro caqiidooyinka.
Naarta ciqaabta weligeed ah ma aha, jidhka iyo nafta midna. She'ool ma aha meel ka hor ama ka dambaysa "maalinta xukunka" meydadka bini aadamka lagu soo kici doono oo lagu tuuri doono meeshii ay ku gubi lahaayeen weligood iyo weligoodba weligood oo aan weligood la baabbi'in. Jahannamada ma aha meel, meesha dhallaanka ama nafta dhallaanka iyo kuwa aan la baabtiisin ay tagaan oo lagu ciqaabo dhimashada kadib. Mana aha meel ay maskaxda ama nafsadu ku mutaystaan ​​ciqaab nooc kasta ah maxaa yeelay iyagu ma gelin laabta kaniisadaha qaarkood ama ma aqbalaan caqiidooyin gaar ah ama qodobo gaar ah oo caqiido ah. She'ool ma aha meel ama god, ama god, ama xabsi, ama haro baaruud gubanaysa oo meydadka bani'aadamka ama naftiisa lagu daadinayo dhimashada. She'ool ma aha meel loogu habboon yahay ama lagu tuuro xanaaqa ama ilaah jecel, oo uu ku cambaareeyo kuwa caasiniya amarradiisa. Kaniisad ma leh kaligii cadaabta. Naartu faa'iido uma aha kaniisad ama diin midna.
Jahannamada waxay leedahay xukunka laba duni; adduunka jir ahaaneed iyo adduunka astral ama maskaxda. Marxaladaha kala duwan ee caqiidada cadaabta waxay khuseysaa mid ama labadaba adduunyada. Jahannamada waa laga yaabaa inay gasho oo qibrad ku hesho inta jidhka adduunku jiro iyo waayo-aragnimada waxaa lagu fidin karaa adduunka astral ama maskaxda maskaxda inta lagu jiro nolosha jidhka ama dhimashada kadib. Laakiin tani uma baahna oo waa inaysan u horseedin qof cabsi iyo cabsi midna. Waxay u egtahay wax dabiici ah oo isku mid ah sida nolosha iyo koritaanka adduunka jir ahaaneed. Awoodda cadaabta ee dunida jireed ayaa lagu fahmi karaa maskax kasta oo aan ku filnayn ama aan ka daalin in laga hor istaago fahamka. Awoodda cadaabta ee adduunyada dhimirka ama astralka sidoo kale waxaa fahmi kara qof aan ku adkaysanaynin inuusan jirin astral ama adduun maskaxeed iyo mid aan rumeysneyn in dhimashadu ay dhammaanayso iyo in uusan jirin dowlad mustaqbal dhimashad ka dib.
Nin walbana mararka qaar waa la caddayn doonaa jiritaanka shay lagu muujiyey erayga cadaabta. Nolosha adduunyada jireed waxay cadaynaysaa nin kasta. Markuu ninku galo dunida nafsiga ah khibradiisa waxaa la siin doonaa caddeyn kale. Muhiim maahan, si kastaba ha noqotee, in ninku sugo ilaa geerida ka dib inuu la kulmo jahado astaan ​​ama dhimir. Khibraddaas ayaa laga yaabaa inay lahaato inta ay ku nooshahay jidhkiisa jir ahaaneed. In kasta oo adduunyada maskaxdu ay noqon karto waayo-aragnimo dhimashadeeda ka dib ma noqon karto mid si caqli leh loola tacaali karo. Waxaa laga yaabaa in lagu garto oo si caqli gal ah loola macaamilo inta ninku ku nool yahay jidhka jirkiisa iyo geerida ka hor.
Naarta ma aha mid taagan ama joogto ah. Waxay ku badashaa tayada iyo tirada. Dadku wuu taaban karaa xuduudaha cadaabta ama wuxuu baadhi karaa waxyaalaha qarsoon ee qoto dheer. Wuxuu ahaan doonaa mid aan aqoon u lahayn ama wax ka baran doonin waayo-aragnimadiisa iyadoo la tixraacayo daciifnimada ama kartida iyo awoodda maskaxdiisa iyo sida ay diyaarka u tahay inuu istaago imtixaannada oo uu qirto xaqiiqada sida ku saleysan natiijadiisa.
Waxaa jira laba nooc oo cadaabta ah oo dunida gudaheeda ku sugan. Waxaa jira qof cadaabta shaqsiyeed oo gaar ah, oo leh booskiisa jirkiisa. Marka cadaabta qofka jidhkiisu kaco waxay soo saartaa xanuunno ay dadka badankood ku yaqaanaan. Ka dib waxaa jira cadaabta guud ama bulshada, oo qof walbaa qayb ku leeyahay. Naarta lama helo markiiba, oo haddii ay tahay, waxaa loo arkaa mid aan dhammaystirnayn iyo guud ahaanba shaqsi ahaanba. Muuqaalo fiiqan lama arag.
Markuu ninku sii wadayo sahaminta wuxuu ogaan doonaa in “Ibliis iyo malaa'igihiisa” ay qaadan karaan — in kasta oo aysan ahayn qaab jidh ahaaneed. Shaydaanka qof ee cadaabta shaqsiyadiisa gaarka ah leh ayaa ah qofka oo raba inuu xukumo. Malaa'igta shaydaanka, ama jinniyada yar yar, waa cunno yari, damacyadooda, damacyadooda iyo damacyadooda addeeca oo u adeega damacooda ugu weyn ee Ibliiska. Rabitaanka ugu weyn waxaa sii xoogeeya oo boqornaa ciidankiisa jinniyo yar yar, damacyada, oo waxaa lasiiyaa awood iyo awood uu maskaxda ku oggol. Intii la siiyay ama la oggol yahay xukunka shaydaanka lama fahmin oo cadaabta ayaa wali ah mid aan la garanayn in kastoo ay tahay dhul firfircoon. In kasta oo uu dadku adeeco, buuxiyo ama gorgortamo la yeesho ama uu bixiyo hawadiisa iyo damacyadiisa, sheydaanka iyo cadaabta lama yaqaan.
In kasta oo uu ninku gudbo xuduudahaaga oo uu la kulmo qaar ka mid ah xanuunadii laga helay daafaha bannaanka, kuwan laguma yaqaan qiimahooda dhabta ah waxaana loo arkaa inay yihiin nasiibdarrooyinka nolosha. Marka nolosha nolosha ka dib qofku wuxuu u yimaadaa dunida jir ahaaneed oo wuu garaacaa xuduudaha cadaabta, wuuna ku raaxeystaa xoogaa yar oo raaxo ah oo wuxuu ku siiyaa qiimaha ama ciqaabta cadaabta. In kasta oo laga yaabo inuu sifiican u galo ma arki karo mana garanayo inay tahay cadaabta. Marka cadaabta wali lama arag oo ragga lama yaqaan. Dhibaatooyinka cadaabta waxay raacdaa waxyaabaha aan dabiiciga ahayn, sharci-darrada iyo xad-dhaafka ah ee rabitaanka cuntada iyo rabitaanka, sida cunno-xumada xad-dhaafka ah, isticmaalka xad-dhaafka ah ee daroogada iyo khamriga, iyo kala duwanaanta iyo xadgudubka galmada. Albaab kasta oo jahannamo ah waxaa ku dhex yaal daruuro la galo. Kicinta waa dareenka raaxada.
Mar alla inta dadku raaco dareenka iyo damacyada dabiiciga ah wax badan kama ogaan doono cadaabta, laakiin wuxuu ku noolaan doonaa nolol dabiici ah raynrayntiisa dabiiciga ah iyo taabashada mararka qaarkood cadaabta. Laakiin maskaxdu kuma qanacdo inay ka tagto qayb kasta ama xaalad ka jirta adduunka oo aan cidla lahayn. Marka jaahilnimadiisa maskaxdu waxay mararka qaar jebisaa sharciga, iyo markay cadaabta galayso. Maskaxdu waxay raadsataa farxad wayna heshay. Maaddaama maskaxdu ku sii raaxeyso, taas oo ay tahay inay ku sameyso xubnaha garaadka, way daciifiyaan; Waxay lumiyaan soo dhaweyntooda waxayna u baahan yihiin dhiirrigelin weyn; sidaa darteed maskaxda ayaa lagu boorinayaa iyaga inay ka dhigaan kuwa raaxaysta oo sii xoog badan oo qallafsan. Raadinta raynrayn badan, oo isku dayeysa kordhinta farxadda, waxay xadgudub ku tahay shuruucda oo ugu dambayntii waxay heli doontaa ciqaabta saxda ah ee silica iyo xanuunka. Cadaabta uun bay gashay. Maskaxda ayaa ka baxsan kartaa cadaabta ka dib markay bixiso ciqaabta dhibka ka dhashay ficilka sharci darrada ah ee sababay. Laakiin maanka caqliga lihi diyaar uma ahan inuu sidan sameeyo wuxuuna isku dayaa inuu ka baxsado ciqaabta. Si looga baxsado suugaanta, maskaxdu waxay u baahan tahay daawo ka hortag badan oo lagu hayo soonka cadaabta. Marka maanka laga bilaabo nolosha ilaa nolosha ayaa isku urursanaya, kuna xidha xidhiidhiye, silsilad deyn ah. Kuwan waxaa been abuurmay fikirro iyo ficil. Tani waa silsiladdii uu ku xidhnaa oo ay ku haysaa rabitaankiisa xukun, ee Ibliiska. Ragga fikirka leh oo dhan waxay u safreen wax yar cadaabta qaarna si wanaagsan ayey ugu gudbeen siraha. Laakiin in yar ayaa bartay sida ama ay awood u leeyihiin inay indha indheeyaan, sidaa darteed ma oga inta ay ku jiraan, mana yaqaanaan koorsada ay tahay in la qaado si looga baxo.
Haddii uu ogyahay ama yaanu ogayn, nin kasta oo fikir ah oo ku nool adduunka jidhka ayaa ku jira cadaabta. Laakiin cadaabta lama ogaan doono runtiina sheydaanka uma ogaan doono qaababka dabiiciga ah ee fudud iyo kuwa fudud. Si loo helo cadaabta oo loo ogaado shaydaanka waa inuu ku socdaa si caqli gal ah, waana inuu u diyaar garoobo qaadista cawaaqibka. Cawaaqibka ayaa ah silica bilowga ah, kaas oo si joogto ah u kordha. Laakiin aakhirka xorriyadda ayaa jirta. Qofna uma baahna inuu u sheego qofna inuu doonayo inuu cadaabta raadsado oo uu shaydaanka madax u noqdo. Isagu wuu samayn karaa waana inuu sameeyaa labadaba inta uu adduunka ku nool yahay.
Si aad u hesho cadaabta oo aad la kulanto shaydaanka mid kaliya ayaa iska caabin kara oo ka adkaada oo xakameeya damaciisa xukunka. Laakiin aadanuhu sidaa uma badna inuu la tartamo damaca salka ku haya iyo xukunka xukunka ee dabeecadiisa. Rabitaankan weyn ayaa asal ahaan ka muuqda, laakiin isagu waa kan ugu sarreeya malaa'igihiisa oo dhan, kuwa jinniyo yar yar, iyo damacyada ka yar. Sidaa darteed ninka, markuu la doodo Ibliiska, wuxuu la kulmaa mid ka mid ah saraakiishiisa ama hoosta. Laakiin xitaa in mid ka mid ah kuwa ku loolamaya ay ku filan tahay in la siiyo tartame dagaal weyn.
Nolosha oo dhan ayaa laga qaadan karaa ka soo kabashada iyo xakameynta qaar ka mid ah waxyaabaha aad u yar. Adigoo la dagaallamaya ama ka adkaanaya qaar ka mid ah rabitaanka cuntada, ama diidmada ah in lagu xukumo oo aad u shaqayso gaarista himilo qaldan oo qaldan, nin ayaa ka adkaanaya mid ka mid ah malaa'igihiisa Ibliiska. Weli isagu ma la kulmo shaydaanka weyn. Rabitaanka weyn, sayidkiisii-Ibliis, ayaa weli ku sii jira asalka, laakiin waxaa isaga loogu muujiyey labadiisa dhinac: galmada iyo awoodda; Jahannamo bay ku siiyaan, ka dib markii la farxo. Labadan, jinsi iyo awood, waxay asal ahaan ka leeyihiin waxyaalaha qarsoon ee abuuritaanka. Adigoo guuleysanaya oo aad u maamusho si caqli leh ayaa mid u xallinaya dhibaatada jiritaanka oo qeybtiisa ka mid ah ka helaa.
Isku day la go'aamiyey si looga gudbo rabitaanka sayidkiisa ayaa caqabad ku ah iyo u yeerista shaydaanka. Ujeedada galmadu waa midnimo. Si loo ogaado midnimadu waa inaan laga adkaanin damaca jinsi. Sirta iyo ujeedada xoogga waa helitaanka sirdoonka oo caawiya dhammaan. Si caqligal ahaanta sidan loo fahmo qofku waa inuu ka adkaadaa oo uu ka adkaadaa rabitaanka awoodda. Qofka lagu xakameeyo damaca galmada ama raba inuu xukunka awood u leeyahay ma ogaan karo midnimada iyo waxa sirdoonka waxtar leh ay tahay. Khibraddeeda iyada oo loo marayo nolosha badan maskaxdu waxay raadisaa horumar, ha ahaato qaab hawleed caqliyeed ama rabitaan ilaa ilaahnimo ama labadaba. Maaddaama maskaxdu ku sii waddo horumarinteeda waxay la kulanto dhibaatooyin badan oo waa inay saaraan ama hoos u dhigaan qaar badan oo ka mid ah dareenka dareenka iyo soo jiidashada badan ee maskaxda. Kobaca joogtada ah iyo horumarka maskaxda lama huraan wuxuu u horseedaa inuu ku lug yeesho halganka weyn ee Ibliis, halganka galmada, iyo wixii intaas ka dambeeya, ka dambaynta shaydaanka ee ka adkaanta rabitaanka awoodda.
Waxyaabaha qarsoon iyo sawiradu waxay muujiyeen oo ay ku qeexeen maanka ku hawlan halganka, muuqaallo noocan oo kale ah ama sharraxaad ah sida Laocoon, shaqadii Hercules, khuraafaadka loo yaqaan "Prometheus", halyeeyga dhogorta dahabka ah, sheekada Odysseus, halyeeyada Helen ee Troy.
Mucjisooyin badan ayaa galay cadaabta, laakiin in yar ayaa ka adkaatay oo hoos u dhigtay shaydaanka. In yar ayaa diyaar u ah ama awood u leh inay sii wadaan dagaalka ka dib markii ugu horreysay ee markaa, kadib, markii ay jug iyo jilicsan tahay shaydaan labajibbaar ah oo rabitaan galmo iyo rabitaan xoog ah, ayay ku bixiyeen, ka baxeen dagaalka, oo la garaacay. , oo waxay ku sii hoos jireen rabitaankooda. Intii lagu guda jiray halganka, waxay la kulmeen wax badan oo go 'ah sida ay rabaan inay istaagaan. Kadib markay dhiibteen, dad badani waxay moodayaan inay ka adkaadeen kuwa kale dagaalka ka dib iyo guulo gaar ah oo raacaya oo ah abaalmarinta soo gudbinta dagaalka ka dib. Qaarkood waxay naftooda u cambaareeyeen inay yihiin riyaal aan waxtar lahayn iyo doqonnimo ay ku kaceen fal nacasnimo ah ama wax aan macquul aheyn. Ma jiraan calaamado dibedda ah oo guusha ah marka qofku la dagaallamo oo ka adkaado shaygiisa oo naarta dhaafo. Wuu ogyahay, iyo dhammaan faahfaahinta ku xiran.
Nooca ugu weyn ama heerka cadaabta, waa silica ama silica jidhka jirkiisa. Marka jirku jirku ku sugan yahay caafimaad iyo raaxo ma jiro fikir ama soojeedin cadaabta. Aaggan caafimaad iyo raaxo ayaa laga tagaa marka waxqabadka jirka uu xumaado, dhaawaca jirka u geysto, ama marka damaca dabiiciga ee jirka uusan qancin. Nooca kaliya ee cadaabta jireed ee suurto gal u ah in qofku la kulmo ayaa la dareemaa halka uu ku nool yahay adduunkan jireed. Dadku waxay la kulmaan cadaab jireed ka dib gaajada iyo xanuunka. Markii cuntada loo baahdo jirka ayaa gaajadu bilaabataa, oo gaajada ayaa sii adkaata maaddaama jirka loo diido cunnada. Jidh xoog leh oo caafimaad qabna waxay u nugul yihiin xanuunada gaajada marka loo eego midka hore u daalay oo gaboobay. Maaddaama cuntada loo diido jirka isla markaana jirku u ooyo cunnada, maskaxda ayaa la yaab gelisa oo xoogeysa gaajada iyada oo laga fekerayo cuntada aysan haysan. Maaddaama maskaxdu ku sii fikireyso in silica jirka uu sii kordhayo, maalinba maalinta ka dambeysa jirka wuxuu noqdaa mid fayow, iyo duurjoog. Gaajada waxay noqotaa gaajo. Jirka ayaa qabow ama qandho, carrabkuna wuu qallalan yahay ilaa jirku u noqdo lafaha midabka oo inta maskaxda oo dhami jirku wuxuu ka dhigayaa silica jirka inuu aad u kaco isagoo ka fekeraya waxa jirka doonayo. Qofkii dhibka ku abuura soonka ikhtiyaariga ah ma lahan cadaabta marka laga reebo wejigiisa ugu khafiifsan, maxaa yeelay soonku waa iskaa wax ujeedo oo ujeeddo ahaan iyo ujeedo maskaxeed. Soomanida tabaruca ah maskaxdu ma sii kordhiso gaajada iyada oo la siinayo habka ay rajada u qabato. Waxay ka hortagtaa fikirka waxayna ku dhiirigelisaa jirka inuu qabto waqtiga loogu talagalay, badanaa maskaxda ayaa jirka u sheegta inuu cuno doono marka soonku dhammaado. Tani aad bay uga duwan tahay cadaabta oo ku adkaysata gaajada aan qasabka ahayn.
Qofka caafimadka ahi ma bilaabo inuu fahmo cadaabta xanuunka jirku yahay ilaa uu soo maray khibrad noocan oo kale ah sida ilko bogsashada. Haddii ishu indhuhu ku soo baxaan, feedhkiisu way jajaban yihiin, neefsashada ayaa adkeysay; Haddii uu ku dhaco vat of acid karkaraya ama madaxiisa ka lumaan, ama haddii uu leeyahay kansar cuna cunaha, dhammaan dhacdooyinka silica ay keenayaan waxa loogu yeero shilalka oo ay wargeysyadu buuxsameen, khibrad kasta oo noocaas ahi waxay galin doontaa cadaabta. . Xoogga uu cadaabkiisu noqon doono marka loo eego caqligiisa iyo kartidiisa silica, iyo sidoo kale xoojinta silica jirku ku hayo maskaxda naxdinta leh iyo argagaxa leh, sida xaalku ahaa dhibbanayaashii weydiimaha Isbaanishka. Kuwa arka isaga ma ogaan doonaan cadaabkiisa, in kasta oo ay u qalbi qaboojin karaan oo ay isaga ku sameyn karaan wixii karaankooda ah. Si loogu mahadnaqo cadaabkiisa waa inuu awood u yeeshaa inuu naftiisa geliyo meesha bukaanka iyadoo aan laga adkaanin xanuunka. Ka dib markay dhammaato qofkii silica noocan oo kale ah laga yaabo inuu hilmaamo, ama ku riyoodo inuu ku riyoodo oo keliya.
Ma jiro wax noocee ah ama xaalad ka dib geerida fiqiga ee fiqiga, ilaa mooyee naqshadeeye nashqadeeyaha awoodo inuu la socdo sawirada uu sawiray intii uu noolaa. Tani waa wax aan macquul aheyn; laakiin xitaa haddii uu karti u leeyahay, kuwa kale oo aan ahayn isagu ma la kulmi doono. Cadaabta sawirka ayaa jira oo keliya kan rinjiyeeyay.
Dhimashadu waa sida dhalashada oo kale. Gobollada dhimashada ka dib waa kuwo dabiici ah oo isku xigxig ah marxaladaha isku xigxiga ee koritaanka jirka. Farqiga ayaa ah in, laga bilaabo dhallaanka ilaa qaan gaadhnimada, waxaa jira isku urursi, isu imaatin, dhammaan waxsoosaarka aadanaha; halka, geerida ama geerida ka dib ay jirto in si tartiib tartiib ah maskaxda looga tuuro dhamaan qeybaha guud iyo dareenka, iyo ku soo noqoshada dambiile wanaagsan.
Maskaxda sida ugu xiisaha badan u taabata dareenka hilibka isla markaana ku raaxeysta ugu weyn iyaga ayaa leh cadaabta ugu xun. Sheydaanku wuxuu kujiraa kala-goynta maskaxda iyo rabitaanka iyo dareenka, xilliyada dhimashada kadib. Sheydaanku wuu dhammaadaa marka maanku ka soocdo damacyada jidhka ee ku xidhma. Dhimashada marmarka qaarkood waxaa jira, laakiin had iyo jeer, sii wadida aqoonsiga oo la mid ah qofka dareenka ku leh nolosha jidhka. Maskaxda qaarkood waxay seexdaan waqti dhimashada ka dib. Maskaxda shakhsiyaadka shakhsiga ah ee qabta fikirka ah inay ka kooban yihiin kuna tiirsan yihiin dareenka waxay leeyihiin naarta ugu dabka badan. Naarta dhimashada cadaabta ka dib waxay bilaabataa isla marka maanka uu ka madax banaanaado jirka jirka oo isku dayo inuu muujiyo sida ugu wanaagsan ee noloshiisa hore. Rabitaanka xukunka ee nolosha, oo lagu xoojiyo dhammaan waxyaalaha ka sii yar, ayaa sheegta dareenka maskaxda wuxuuna isku dayaa inuu ku qasbo maskaxda inuu oggolaado oo qirasho daacadnimada. Laakiin maanka ma awoodo, maxaa yeelay waa gobol kale oo ka madax bannaan waxayna doonaysaa xorriyad ka timaadda damacyada noocaas ah ee aan ilaalin karin xoogaa loo haystay inta ay nolosha ku jiraan laakiin taasi uma suuragelin inay si buuxda u muujiso. Naartu waxay socotaa oo keliya muddada maskaxda looga baahan yahay inay ka xorreyso damacyada ka horjoogsada, maanka, inay raadiso dowladdeeda. Muddadu waxay noqon kartaa daqiiqad ama waxay noqon kartaa waqti dheer. Muddada, su’aasha mudada jahannamada, ayaa ah tan keentay cadaabta weligeed ama dhammaadka leh ee fiqiga. Fiqiga fiqi ahaaneed wuxuu ku qiyaasey in cadaabta waqti aan dhamaaneyn –in ay tahay kordhinta aan dhamaadka laheyn ee fikradihiisa waqtiga aduuniga. Waqtiga jireed, ama waqtiga jireed, kuma jiraan wax ka mid ah xaaladaha dhimashada ka dib. Gobol kasta wuxuu leeyahay waqti u gooni ah. Marka loo eego xoogga dareenka weligiis ama muddo dheer waa laga yaabaa in loo ekaado daqiiqad, ama daqiiqad ayaa loo kordhin karaa daa'in. Maskaxda guud ee ficil deg deg ah, cadaabta weligeed ah waxay noqon kartaa waayo-aragnimo daqiiqad ah. Qalbi jilicsan oo doqon ah wuxuu ubaahan karaa waqti dheer oo cadaabta. Waqtigu waa qarsoodiga ka weyn cadaabta.
Maskax kasta ayaa kaligiis mas'uul ka ah geeridiisa dhaadheer ama gaagaaban geeridiisa iyo nolosha intaba. Inta lagu jiro mudada dhimashada iyo kahor inta uusan ka baxsan karin cadaabta, maanka waa inuu la kulmaa kana adkaadaa shaydaanka. Iyada oo loo eegaayo xoogga maskaxda iyo qeexida fikirka, sheydaanka ayaa qaab qaadan doona oo maskaxda ku helaya. Laakiin Ibliisku qaab ma samayn karo haddii maskaxdu awoodi weydo inay isaga siiso qaab. Shaydaanka uma muuqdo isku qaab qaab dhan maskaxeed. Maskax kasta wuxuu leeyahay sheydaan u gaar ah. Shaydaanka kasta wuxuu ku habboon yahay tayada iyo awoodda maskaxda maankiisa. Shaydaanka ayaa ah damaca ka sarreeya dhammaan damacyada nolosha ee hadda uun dhammaaday, qaabkiisuna waa nooc ka kooban dhammaan fikradaha adduunyo iyo jidhka ee noloshaas. Sida ugu dhakhsaha badan ee Ibliisku maskaxda u garto, dagaal ayaa jira.
Dagaalku ma aha xardho, onkod iyo hillaac, dab iyo baaruud, sida jidhka iyo nafta. Dagaalku wuxuu u dhexeeya maskaxda iyo rabitaanka. Maskaxda ayaa sheegta sheydaanka, sheydaankuna wuxuu eedeeyaa maskaxda. Maskaxdu waxay ku amrtaa shaydaanka inuu tago, sheydaankuna diido. Maskaxdu waxay bixisaa sabab, sheydaanku wuxuu ku jawaabayaa isagoo muujinaya rabitaan maskaxeed uu xayiray inta lagu guda jiray nolosha jidhka. Rabitaan kasta iyo ficil kasta oo la sameeyo ama la oggolaado maskaxda inta lagu guda jiro nolosha ayaa hoos u dhacda oo la dhacsan maskaxda. Rabitaanku wuu xanuunsadaa. Dhibaatadan ayaa ah cadaabta naarta iyo baaruudda iyo cadaabka oo uu fiqiga fiqiga u weeciyay jinniyada fiqi ahaaneed. Shaydaanka ayaa ah rabitaanka sayid ee nolosha, oo loo habeeyay qaab. Qaababka badan ee ay kaniisadaha kaladuwan u soo saareen shayaadiintooda waxay u sabab tahay jinniyada kaladuwan iyo damacyada kala duwan, oo ay ku bixiyaan qaabab dhimashada ka dib maskaxda badan oo shakhsiyadeed.
Diimaha qaar waqtigeenna uma eka tixgelin sidii kuwii hore. Qaar ka mid ah diimaha qadiimiga ah waxay u oggolaadeen maskaxdu inay ka gudubto cadaabta si ay ugu raaxaysan karto abaalmarinteeda wanaag wixii ay qabatay intii ay nooshahay. Mid ka mid ah diinta diinta masiixiga ayaa dib u celisa shaydaanka oo dadka u ogolaataa inuu cadaabta ka baxo, haddii asxaabtiisa ay ku bixin doonaan ganaaxiisa iyo khidmada latalinta ee kaniisada. Laakiin waa in loo qaadin nin kasta oo aan garaad u lahayn inuu galo kaniisadaas ka hor intuusan dhiman. Waa inuu had iyo jeer cadaabta kusii nagaado, sheydaankuna wuu ku sameyn karaa siduu doono, sidaa darteed ayay yiraahdaan. Ururada kale waxay yareeyaan dakhligooda iyagoo ku sii adkeysta go'aanadooda. Ma jiro ganacsi u eg ama si kale oo looga baxo cadaabta. Haddii aad gudaha gasho waa inaad ku sii jirtaa. Inaad gasho ama baxdo waxay kuxiran tahay inaadan rumeyn ama aadan rumeynin caqiidada kaniisadahaas oo dhan.
Laakiin wax kasta oo kaniisadaha odhan karaan, xaqiiqadu waxay tahay in Ibliisku ka dib, rabitaanka qaab ahaan, uu muujiyey oo uu ku eedeeyay maskaxda dhammaan khaladaadkii uu sameeyey intii noloshiisa jirtay, iyo markii maanka ka dib uu ku xanuunsaday silica ay keentay damacyada gubashada, Markaas Ibliisku mar dambe ma sii qaban karo maskaxda, waaxda maanka, waana la soo afjarayaa cadaabtaas. Maskaxdu waxay ku socotaa jidkeeda si ay ugu raaxeysato waqtigeeda nasashada ama inay ku riyootid himilooyinkeeda, u diyaargarowga ay ugu laabato adduunkeeda jireed si ay u bilowdo xilli kale oo dugsi ah fasalkeeda nolosha. Shaydaanka ayaa ku sii jiraya rabitaankiisa in muddo ah, laakiin gobolkaasi markaa cadaabta uma ahan damaca. Maskax la’aan ah, sheydaanka uma awoodo inuu sii wado qaab ahaan sidaas darteedna tartiib tartiib ayaa lagu xaliyaa awoodaha gaarka ah ee uu ka koobnaa. Taasi waa dhamaadka shaydaankaas qaaska ah.
Naarta iyo Shaydaanka waa inaan lagu fakarin cabsi iyo gariir. Naarta iyo Shaydaanka waa inay ka fikiraan qof kasta oo ka fikiri kara oo xiise u leh asalkiisa iyo mustaqbalkiisa. Isagu waa bugaboo kuwa weli silica ku haya qalloocnaan ayaa maskaxdooda lagu siiyaa tababar hore. Waxaan hubin karnaa haddii cadaabta iyo sheydaanka jiraan inaynaan ka baxsan karno anagoo isku dayeyna inay cararaan oo aan ka warqabin. Markuu sii bato waxa Ibliis iyo cadaabku yaryahay wuu ka baqayaa iyaga. Iyaga iska indhatir haddii aan rabno, laakiin way sii socon doonaan illaa aan ka ogaanno oo aan baabi'inno.
Laakiin waa maxay sababta maskaxdu u xanuunsaneyso cadaabta, oo waa maxay ujeedadu? Maskaxdu waxay ku dhacdaa cadaabta sababtoo ah ma aysan gaari karin awooddeeda, maxaa yeelay awooddeeda lama horumarin, isku dubaridid ​​iyo is waafajin midba midka kale, maxaa yeelay waxaa jira taas oo jaahil ah, taasoo ka soo horjeedda kala dambeynta iyo wada noolaanshaha, taas oo soo jiidata dareen. Maskaxdu waxay ku dhici doontaa cadaabta illaa ay ka horumariso oo ay hagaajiso awooddeeda, ku beddesho jaahilnimada aqoonta oo ay ku guuleysato awooddeeda.
Ujeedada adduunka iyo rabitaanka shaydaanka, waa jimicsi iyo waxbarid maskaxda iyadoo la siinayo waaya aragnimo xagga dareenka ah, si ay u kala soocdo ficilka awoodaha u gaarka ah iyo natiijada dareenka, iyo in laga adkaado caabbinta Waxa lagu bixiyaa damac xoog maskaxda ah in la horumariyo, sidaa darteed maanka ugu dambayntiina wuxuu ku yimaadaa garashada iyo hanashada naftiisa iyo ka kasbashada naftiisa, aqoontiisa iyo xorriyaddiisa. Khibrad la’aan, dareen la’aan; aan lahayn dareento, silica lahayn; dhib la'aan, caabin la'aan iyo iska caabin la'aan is-maamul; la'aan, aqoon la'aan, aqoon la'aan; aqoon la’aan, xoriyad la’aan.
Jahannamada waxaa maskaxda lagu hayaa damac, kaas oo ah indhoole indho la'aan ah oo xoolo xoola ah isla markaana doonaya damaca taabashada maskaxda, maxaa yeelay muujinta dareenkeeda waxaa sii xoojin kara maskaxda oo keliya. Waxay doondoontaa xanuun sida xanuunku jecel yahay oo kale, maxaa yeelay, isagu wuxuu bixiyaa waxgarasho, qalbiguna wuu ku farxaa. Dareenku kuma farxo maskaxda, maskaxda sare, ee maahan qofka.
Jahannamada waa goobta dagaalka ee maskaxda iyo rabitaanka. Naarta iyo damacgu ma aha dabiicadda maanka. Haddii maskaxdu ay tahay dabeecadda rabitaanka markaa damacgu ma siin karo cadaab ama silica maskaxda. Maskaxda ayaa la kulantaa cadaabta maxaa yeelay way ka duwan tahay oo ma aha isla sidii tan cadaabta loo sameeyo. Laakiin way silcaysaa maxaa yeelay waxay qayb ka qaadatay ficilkii keenay cadaabta. Dhibaatada maskaxda haysataa waxay qaadataa ilaa muddada ay ku qaadanayso inay ka soocdo waxa ka duwan nooca ay tahay. Xorriyadda nafteeda oo ka xoraysa rabitaanka iyo cadaabta dhimashada kadib weligeed ma hesho xoriyad.
Sababta maskaxdu u baahan tahay inay la xiriirto oo ay la shaqayso damac, taas oo ka duwan oo aan ahayn, ayaa ah inay jirto tayo mid ka mid ah awoodaha maskaxda taas oo ah nooca rabitaanka. Tayadaani waa kuliyada mugdiga ah ee maskaxda. Kuliyadda mugdiga ah ee maskaxda ayaa ah gudaha iyo maskaxda taas oo rabitaanku ku soo jiito maskaxda. Kuliyadda mugdigu waa kuliyadaha ugu adag ee maskaxda iyo midka keenaya silica maskaxda. Maskaxdu waxay soo jiidataa damac sababtoo ah kulliyadda mugdiga ah ee maskaxda. Nolosha xasaasiga ah iyo nolosha dareenka ee jirka jirka, iyo mabda'a guud ee rabitaanka, waxay leeyihiin awood maskaxda. Markii maskaxdu guuleysato oo ay maamusho awooddeeda mugdiga ah, rabitaanku awood kuma lihi doono maskaxda, sheydaanka wuu qalbi qaboobi doonaa, maskaxkuna mar dambe ma u adkaysan doonto cadaabta, sababtoo ah ma jiraan wax dab ah oo ololi kara jahannamada.
Xor ka ahaanshaha cadaabta, ama shaydaanka, ama silica, ayaa lagu gaari karaa oo keliya inta jidhka jidhka lagu jiro. Naarta iyo sheydaanka ayaa laga adkaadaa maskaxda kadib dhimashada, laakiin waa si ku meel gaadh ah. Dagaalka ugu dambeeya waa in la go’aansadaa geerida ka hor. Ilaa dagaalka ugu dambeeya la dagaallamayo oo lagu guuleysto, maanka ma ogaan karo naftiisa inuu yahay mid joogto ah oo miyir qaba oo xorriyadda ah. Maskax kasta waxay ku dhex nooleysaa hal nolol jir ahaaneed kaqeybqaadkeeda dagaalka xorriyadda. Waxaa laga yaabaa inaysan ka soo bixin guul in noloshaas, laakiin aqoonta laga helay khibradeeda dagaalka ayaa ku dari doonta xooggeeda oo ka dhigaysa mid ku habboon halganka ugu dambeeya. Iyada oo la sii wado dadaallada ayaa loo baahan yahay in la soo afjaro dagaal kama dambeys ah oo lagu guuleysto dagaalkaas.
Rabitaan ama Ibliis weligiis ku boorin halganka ugu dambeeya. Markuu maskaxdu diyaar u yahay wuu bilaabmaa. Sida ugu dhakhsaha badan ee maskaxdu iskaga caabiso damac oo diido inuu u dhiibo mid ka mid ah damacyada ay asal ahaan u ogtahay inaysan ka soo bixinayn, ka dibna naarta ayay galaan Jahannamada waa xaalad silica maskaxda ku haysa dadaalkeeda sidii looga gudbi lahaa jahligeeda, si loo helo is-maamul iyo aqoon. Maaddaama maskaxdu ay taagan tahay dhulkeeda oo aysan soo bixin, sheydaanku wuu sii firfircoon yahay wuxuuna adeegsanayaa go'kiisa iyo dabka cadaabta oo aad u gubta. Laakiin haddii aan dagaalku gabi ahaanba laga tanaasulin dabka uu sii shido qoomammada, qoomamo iyo murugo maskaxda ka haysata inay dhalisay iyo inay umuuqatay guuldarro. Maaddaama ay dib u cusbooneysiineyso dagaalka ama ay sii waddo istaagkeeda, dhammaan dareennada waxaa lagu canshuuraa illaa xadka culeyska; laakiin iyagu ma jebin doonaan. Dhamaan tiirarka iyo dareenada iyo dareenada ka dhalan kara da'da rajada waxay ka muuqan doonaan jidka maskaxda markay ku taal 'jannada' jahannamada. Dabka cadaabta ayaa sii badanaya iyadoo maskaxdu sii wadayso inay ka hor tagto ama ka kacdo iyaga. Maaddaama maskaxdu diido inay ku qanacdo ama ay siiso mid kasta oo himilooyinkeeda ku hoos jira, iyo sida ay u diiddo inuu u hoggaansamo galmada ama doonista galmadu, gubistu waxay sii kordhaaya olol iyo olole ka dibna dabku wuxuu umuuqdaa inuu gubanayo. Laakiin dhibku kama yarayn, waayo booskiisa waxaa ka jira faaruq iyo dareen gubasho iyo maqnaansho iftiin, taas oo cabsi weyn u leh sida dabka ugu kulul. Dunida oo dhami waxay noqotaa cadaabta. Qosolku waa sidii lebis madhan oo kale. Dadku waxay u ekaan karaan inay yihiin sidii gacmo-dareyaal ama nacas khiyaameeya oo hoos u dhacaaya hadhkooda ama ku hawlan cayaar aan faa'iido lahayn, noloshiisa qofna waxay u muuqataa inay dhammaatay. Hadana xitaa waqtiga ugu murugada badan maskaxdu waxay ogaan doontaa inay u adkaysan karto dhammaan tijaabooyinka, tijaabooyinka iyo dhibaatooyinkasta oo ay doontaba ha noqotee, iyo inayna ku guul darreysato, haddii aysan dhali doonin, iyo inay ka adkaan doonto haddii ay qaban.
Ibliis in lala dagaallamo kuma dhex jiro haweeney kale ama nin kale. Shaydaanka la dagaallami karo oo laga adkaado ayaa ku jira qofka jidhkiisa. Ma jiro qof kale ama jidh kale oo aan naftiisa ahayn oo lagu eedeeyo midka shaydaanka ku cadaaba oo gala naarta. Fikirka noocan oo kale ah waa khiyaanada shaydaanka, kaas oo markaa isku dayaya inuu maskaxda ka tuuro wadada isla markaana ka hortago qofka la dagaallamaya inuu arko shaydaanka dhabta ah. Marka midba midka kale ku eedeeyo wixii ku xanuunsaday, kaas hubaal ah inuusan la dagaalamayn dagaalka runta ah. Waxay muujineysaa inuu isku dayayo inuu cararo ama uu naftiisa ka difaaco dabka. Wuxuu la il daran yahay kibir iyo islaweyn, ama haddii kale aragtidiisa ayaa aad u daruur badan oo dagaalkii ma sii wadan karo, sidaa darteed wuu cararaa.
Maskaxda ayaa ogaan doonta in haddii ay soo baxdo oo ay siiso jidadka marin habaabinta dareenka ama hamigeeda xoog, in aysan ku noolaan karin nolosha jidhka ah mid aan dhiman karin oo ay xorriyad ku heli karto. Laakiin maanka diyaar u ah wuu ogyahay haddii aanu ka dhaadhicin caqliga iyo himilooyinka, in ay noloshaas ka adkaaneyso Ibliis, naarta jajabinayso, dhimashaduna noqon doonto mid aan dhiman karin oo xorriyad heli doonta. Ilaa iyo inta maskaxdu silica ku cadaato kuma haboona inuu dhinto. Taas oo ah maskaxda ama maskaxda ama maskaxda ka adkaan karta dabka jahannamada oo aan noqon karin dhimasho aan dhiman karin waana in loo gubiyaa maskaxda si ay maskax ahaan aan dhiman karin. She'ool waa in la soo dejiyaa oo dabkiisuna uu gubtaa illaa iyo inta wax laga gubayo oo la gubi karo. Shaqada waxaa lagu qaban karaa oo keliya qofku si iskiis ah, miyir iyo caqli ah oo aan dib u soo celin. Ma jiro tanaasul. Naartu nin ma leh oo waxaa ka fogaada ragga intiisa badan. Kuwa diyaar u ah ayaa gali doona oo ka adkaan doona.
Lambarka bisha Diseembar, Tifatiraha wuxuu ku saabsan yahay HEAVEN.